INokia 7.1 ifika ngokusemthethweni eSpain | I-Androidsis
INokia 7.1 isungulwe ngokusesikweni eSpain
AbakwaNokia baye bahlaziya iifowuni zabo kulo nyaka, apho bazise inani elikhulu lezixhobo. Enye yezona zinto zamva nje, Yaziswa kwangoko kule nyanga iNokia 7.1. Ifowuni iza kuzomeleza phakathi kuluhlu lomenzi, njengoko besesikuxelele kwinkcazo-ntetho yayo. Ngoku, phantse iiveki ezintathu emva kwayo, le modeli sele isungulwe eSpain.
IYurophu sele iyintengiso ephambili yeNokia. Ngesi sizathu, ifemi ifuna ukwandisa ubukho bayo kumazwe ahlukeneyo, kunye neemodeli kuwo onke amabakala. Le Nokia 7.1 ifikelela kuluhlu oluxakekileyo oluphakathi, kodwa lelo licandelo elisebenza kakuhle kwinkampani.
ISpain sele iyenye yeemarike zokuqala eYurophu ukufumana olu luhlu luphakathi lutsha luvela kwifemu. Ukusukela nge-29 ka-Okthobha uya kuba nakho ukuthenga le Nokia 7.1 ngokusemthethweni eSpain. Kubathengisi abaqhelekileyo bohlobo.
Kukuphakathi kobubanzi obudibana kakuhle ngokweenkcukacha, Ikwanekhamera yangasemva kabini. Nangona ixabiso lalo liphezulu kunezinye iimodeli ezikweli candelo, ngakumbi xa kuthelekiswa neempawu zaseTshayina. Into enokuthi isindise amathuba akho okuphumelela kwintengiso.
Ixabiso lale Nokia 7.1 eSpain liya kuba ngama-299 euros. Ayililo ixabiso elibi, kodwa liphezulu ngandlela kwiimodeli zoluhlu oluphakathi kwi-Android. Ke kuyakufuneka ukuba ubone isiphumo esithe ixabiso linalo kwintengiso kwilizwe lethu.
Ikhutshwe ngemibala emibini eyahlukileyo, eluhlaza okwesibhakabhaka nokungwevu. Uyazi, kwabo banomdla kule Nokia 7.1, kuya kuba lula ukuyithenga ngokusemthethweni eSpain ukusukela ngoMvulo olandelayo, nge-Okthobha nge-29. Ungayifumana kwiindawo eziqhelekileyo zokuthengisa iifowuni zeNokia. Ukuyithenga akuyi kuba nzima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia 7.1 isungulwe ngokusesikweni eSpain
Uyenza njani idatha yokonga kwi-Facebook
I-PAKO Ngonaphakade ikulethela eyona nto intle yesaga enkonkxiweyo